A encane ekhoneni ekhishini: ngokukhalipha ukuhlela isikhala
Ngokuphumelelayo ukuhlela encane isikhala elingaphakathi - akuwona neze umsebenzi olula. Kodwa indlela obhekene kungenza kube kangangokuba igumbi lakho elincane abonakale libanzi futhi egqamile, kanti ukusebenza walo izohlala phezulu. Ngokuvamile, inkinga inhlangano isikhala kuziwa emakhishini. Yini okufanele siyenze ukuze senze yakho ikhishi elincane eseke ukubukeka okusha futhi babe ergonomic ngaphezulu?
Omunye izixazululo ngempumelelo kakhulu izikhala ezincane - isimo sengqondo emincane ye headset. Kulokhu, lakhulula bakha ingxenye enkulu yabamemezeli egumbini, lapho esikhathini esizayo ungakwazi abeke etafuleni lokudlela ngezithukuthuku module yasenhla nemithombo yasenzansi kwenza ukusetshenziswa esiphezulu we kamelo.
A encane ekhoneni ekhishini iyona kangcono inhlangano okuthiwa "umsebenzi unxantathu". Lihlanganisa izindawo eminingi evame kakhulu abathintekayo lapho upheka ukudla. Lokhu isitofu, usinki esiqandisini. Ngaphezu kwalokho, lezi zinto akufanele kube ngemva kwenye, kubalulekile ukuba uhlele esengeziwe emsebenzini surface phakathi kwazo. A encane ekhoneni ekhishini ikuvumela ukuba libeke echibini ukusebenza, futhi zombili ke, ngokusebenzisa ibanga - isiqandisi nesitofu. Ilungiselelo elinjalo ubhekwa elula kunazo futhi usiza ukulondoloza amandla amakhosikazi angasebenzi, ukuchitha ku ukupheka isikhathi esincane futhi inikeza ukugcinwa lula we ebusweni zokusebenza.
Uma echibini ingekho endaweni ekhoneni ngaphansi kungaba ifakwe egunjini elikhethekile e U-shape. Kuyoba elula esitolo yokuwasha, emabhulashini kanye nokunye okufana nalokho. D.
Emaqaqasini ekhoneni ekhishini Suites kahle kufanelekile esine beya noma ujikelezisa imiklamo wezinciphisi ashaye closers. Ngaphezu kwalokho, phakathi kwazo kukhona eziningi izakhi ezengeziwe :. zangaphansi Withdrawable iziqukathi butylochnitsy, njll Ngaphezu kwalokho, esakhelwe ekhishini ekhoneni, hhayi kuphela organically angena ekamelweni, kodwa futhi ukuvumela ukusetshenziswa eliphezulu lesikhala sokulondoloza ezibalulekile.
Labanye ifenisha okwesikhathi izindawo ezincane ekhishini futhi kufanele kukhethwe ngokuqapha. amatafula besiyoba sikhulu futhi izihlalo omkhulu kukhona asihlobene lapha. Kungcono ukwakha iphaneli ensikeni, angasetshenziswa njengoba etafuleni lokudlela. A encane ekhoneni ekhishini uyobheka ezinkulu uma ukuyisebenzisa alo izihlalo. Lawa izingcezu compact ifenisha ngeke bathathe isikhala kakhulu, futhi uma kunesidingo ingakhishwa nje isusiwe.
Nge wonke umthwalo niya umklamo jikelele ingaphakathi. A encane ekhoneni ekhishini azizondayo imfuhlumfuhlu izesekeli Decor izinto. Ithebula phezulu futhi ebusweni ukusebenza kufanele kube mahhala. Ithebula engase aklonyeliswe nge ukuma engajwayelekile napkins, futhi sill - original imbali imbiza. Akubalulekile ukuba ibe yindawo yokugcina izinto ezingadingekile noma gallery imbali. I umncane izingxenye extra kubandakanya ingaphakathi, lighter ibe banzi ekhishini ubukeka.
Ikhishi ifenisha for emakhishini ezincane: ilondoloza isikhala
Amasofa "Ascona": nokubuyekeza amakhasimende. Ifenisha lasekhaya
Ithebula Wamathambo nosihlalo kumfundi: amathiphu wokukhetha kanye nokubuyekeza
Ngokwazi etafuleni lokudlela ingilazi esisebenzayo?
Isiphanyeko for ibhulukwe - lula nokuhleleka
Kanjani ukuzenzela okwakho izandla eshalofini
Indlela ukhule pepper kule abamba ukushisa bese uthola isivuno high
Olomouc, Czech Republic: izinto kanye nokubuyekeza
Ikhadi Ikhompyutha umsindo
Ukwahlukanisa akhawunti nokuqukethwe kwezomnotho: kafushane.
Military Academy RVSN, yaqanjwa Petra Velikogo: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Geza ikhanda lakho ephusheni: uwusizo noma uyingozi?
Ubucwebe oluluhlaza: incazelo
Kakhulu amahle: 15 ukuhlinzwa kokulungisa ukubukeka ethusayo, okuyinto kushabalele
I isichibi imibimbi: Izibuyekezo
I deal womama ushiye? Lokhu kuwusizo!
Ngezindlela ezahlukene ukuze ufake uphawu ubukhulu Windows izicelo